Macalimada waxeeda Qurux waa Dhaafeen.!!! (sheeko Qosol) | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Macalimada waxeeda Qurux waa Dhaafeen.!!! (sheeko Qosol)
Posted By ilwareed on Friday, November 30th 2012 19:33 EAT
Wiil Sagaal sano jir ah ayaa waxaa laga ceyriyay school uu dhiganaayay, kadib markii uu ku tilmaamay macalimadiisa in ay aad u qurux badan tahay misana ay iska dabadhaceyso. dhacdadaan layaab ka leh ayaa waxa ay kadhacday magalada charlotte noord-earoline ee wadanka Mareekanka.
Arintaan mucjisadaleh ee ku dhacday yarkaan ardayka ah ayaa waxaa layaabay dad badan oo ku dhaqan wadanka Mareekanka wiilkaan yar oo 9 jirkaah ayaa waxaa lagu magacaabaa Emanyea lockett, waxaana lasheekay in uu maqlay mid kamid ah macalimiintiisa schoolka asagoo ku leh wiil ka leh in macalimadiisa ay aad u qurux badan tahay, indhahane ay soo jiidaneyso.
Macalinkii maqlay arinkaas ayaa waxa uu ku war geliyay maamulaha schoolka kadibne wiil kii yaraa kaceyriyay schoolka, asagoo ku ee deyay wiilkaas yar in uu aflagaado, anshax xuma ah uu u geystay macalimadiisa, waxa uuna sii raac siiyay mamulaha intaas in wiilkaan uu san imaan karin schoolka mudo 2 maal mood ah.
Arintaan ayaa waxaa caro ka muujisay hooyada dhashay ardaykaan laga ceyriyay schoolka isla markaana sheektay in wiilgeeda uu san aqoon u laheyn fahmina karin wax yaabaha lagu soo ee deeyay.
Ugu dambeyntii maamulka schoolka ayaa sheegay in ardayka ay uga ceyriyeen schoolka kadib markii uu ku kacay dhaqan aan wanaagsaneyn.
Fiiro Gaar ah:. Hadaba aqristoow sidee u aragtaa in 9 jir arrimo noocaan oo kalaa looga ceyriyo school? 9 jir maku kici karaa arintaan?